MB 2017 Sebtember, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Friedrich Nietzsche (1844-1900) waxaa loo yaqaanay "caqiidada kama dambaysta ah" ee dhaleeceyntiisa hoos udhaca ah ee diinta masiixiga. Wuxuu sheegtey in Qorniinka Masiixiyiinta, gaar ahaan sababta oo ah xoogga la saaray jaceylka, ay ka dhalatay wax soosaarka, musuqmaasuqa, iyo aargudashada. Halkii uu ka fikiri lahaa in jiritaanka Ilaah ay suurtagal tahay, wuxuu ku dhawaaqay oraahkiisii ​​caanka ahayd "Ilaah waa dhintay" in fikirka weyn ee ilaah uu dhintay. Wuxuu ujeedadiisu ahayd caqiidada masiixiga ee caqiidada (kaas oo uu ugu yeedhay aaminaad hore oo dhintay) in lagu beddelo wax asal ahaan cusub. Markii uu maqlay warka ah in "ilaah hore dhintay," ayuu yidhi, falsafada iyo jinniyo lacag la'aana oo la mid ah ayaa lagu soo iftiin doonaa baraarujin cusub. Nietzsche, waxaa jiray bilow cusub oo bulshada ka mid ah "sayniska faraxsan", taas oo mid ka xor ah aaminaadda cadaadiska, taas oo dadka ku reebtay farxadooda iyada oo loo marayo xaddidanno cidhiidhi ah.
Sidee ayaynu ula garab taaganahay cawaan-laaweyaasha?
Falsafadda Nietzsche waxay dad badani ku dhiirrigelisay inay qaataan diin laaweyaasha. Xitaa Masiixiyiinta dhexdooda, waxaa jira qaar soo dhaweynaya waxbaristiisa maxaa yeelay waxay aamminsan yihiin inay cambaareynayaan nooc Kirishtaan ah oo iska dhigaya inuu Ilaah dhintay. Waxyaabaha ay iska indhatirayaan waa in Nietzsche uu u arkaayey fikirka ilaah kasta oo aan caqli gal ahayn uuna u arkaa nooc kasta oo aaminaad ah inay tahay doqon iyo dhaawac. Falsafadiisa ayaa ka soo horjeedda diinta kiristaanka ee Kitaabka Qudduuska ah, taas micnaheedu maahan in aan rabno in aan iska sarreyno isaga ama caasiyiinta kale. Baaqayadu waa inaan nahay bini aadam (ay kujiraan kuwa caabuda) waxay rabaan inay gacan ka gaystaan ​​fahamka in Eebbe uu iyaga sidoo kale u joogo. Waxaan ku oofinnaa wicitaankan annagoo tusaale u soo qaadnayna qaab nololeed oo loogu talagalay kuwa kale oo lagu garto xiriir farxad leh oo lala yeesho Ilaah - ama sida aan ku sheegno WKG, anagoo nool oo sii gudbinna warka wanaagsan.
Waxaa laga yaabaa inaad horeyba u haysato warqad wax lagu dhejiyo (sida muuqata ka soo horjeedka) oo ku qoslaya Nietzsche. Waxa aan halkan looga fiirsanayn ayaa ah in Nietzsche uu qoray gabayo dhowr ah sanad ka hor inta maskaxdiisu luntay, taasoo muujineysa inuu beddelay aragtidiisa xagga Ilaah. Waa tan mid ka mid ah:
No! Soo laabo ciqaabtaada oo dhan!
Loogu talagalay dadka cidlada ah. Oh soo noqo!
Dhamaan oohintayda ayaa kugu qulqulaya!
Oo qalbigayga ugu dambeeya ayaa olol gala Way kuu dhalaalaysaa!
Oh soo noqo ilaah aan la aqoon! Xanuunkayga! Nasiibkeygii iigu dambeeyay!
Isfaham la’aanta ku saabsan Ilaah iyo nolosha Masiixiyiinta
Waxay u muuqataa inaysan dhamaaneynin faafinta sirta ah ee Eebbe ee ololaya ololka nacaybka. Ilaah waxaa loo muujiyaa inuu yahay aargudasho, qasab, iyo ciqaab ah oo aan ahayn Ilaaha jacaylka, naxariista, iyo caddaaladda. Ilaaha isku muujiyay Masiixa, kaasoo na martiqaada si aan u aqbalno nolosha iimaanka ee isaga oo aan uga baxno dariiqa nolosha ee horseedda dhimashada. Halkii lagu hoggaamin lahaa nolosha kuwa la xukumay iyo kuwa la dulmiyay, nolosha Masiixiyiintu waa qayb farxad leh ka-qaybqaadashadii sii socota ee Ciise, oo Kitaabka Quduuska ahi leeyahay waa inuusan u imaan inuu dunida xukumo laakiin inuu badbaadiyo (Yooxanaa 3,16: 17). Si loo fahmo Ilaah iyo nolosha Masiixiyiinta si sax ah, waxaa muhiim ah in la fahmo farqiga u dhexeeya xukunnada Ilaah iyo xukummadiisa. Eebbe ina xukumi maayo maxaa yeelay isagu wuu inaga gees yahay, laakiin isagaa ina haysta. Go'aannadiisa, wuxuu tilmaamayaa qaababka horseedi kara dhimashada weligeed ah - kuwaasi waa siyaabaha inaga kaxayn kara wada noolaanshaha isaga, kaas oo aan ku helno wanaag iyo duco mahad leh nimcadiisa. Maxaa yeelay, Ilaah waa jacayl, xukunkiisuna wuxuu ka hor imanayaa wax kasta oo inaga gees ah, oo isagu jecel yahay. In kasta oo xukunka bini'aadamka inta badan loo fahmo sida xukunka, xukunka Ilaah wuxuu ina tusayaa waxa nolosha u horseeda marka loo eego waxa keena dhimashada. Xukunkiisa wuxuu inaga caawiyaa inaan ka baxno xukunka ku saleysan dambiga ama xumaanta. Ilaah wuxuu Wiilkiisa u soo diray dunida si uu uga adkaado awoodda dembiga oo uu inaga badbaadiyo addoonsigeeda iyo cawaaqib xumooda, dhimashada weligeed ah. Saddexmidnimada Eebbe wuxuu doonayaa inuu aqoonsado xorriyadda dhabta ah ee keliya: Ciise Masiix, runta nool ee na xorta. Ka soo horjeedda fikradaha qaldan ee Nietzsche, nolosha masiixiga kuma hoos jirto cadaadiska aargudashada. Taa bedelkeed, waa nolol farxad leh oo lala qaato Masiixa iyada oo loo marayo Ruuxa Quduuska ah. Waxaa ka mid ah ka-qaybgalkeenna waxa Ciise sameynayo. Anigu shaqsiyan waan jeclahay sharraxa ay dadka qaar ka helaan ciyaaraha: Masiixiyaddu maahan ciyaar daawade. Nasiib darrose, xitaa dadka qaarkii ayaa arintaan si qaldan u fahma oo waxay ku cadaadiyaan kuwa kale inay wax u qabtaan badbaadadooda. Farqi weyn baa u dhexeeya sameynta camal wanaagsan ee badbaadada (taas oo ahmiyada ina siisa) iyo kaqeyb qaadashada shaqooyinka Ciise, kan ah badbaadadeenna (kaas oo ahmiyada siinaya isaga).
Masiixiyiinta caasiyiinta ah?
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay odhaahda "Masiixiyiinta Masiixiyiinta ah" kahor. Waxaa loo isticmaalaa dadka sheegta inay Ilaahay rumaystaan ​​laakiin wax yar ka yaqaana isaga oo ku nool sidii haddii aysan jirin. Qofka aaminka ah ee aaminka ah wuxuu noqon karaa Masiixi Masiixi ah haddii uu joojiyo inuu noqdo Ciise aaminka ah. Waad isku dhex qarin kartaa nashaadaadka sidan oo kale ah (xitaa kuwa leh sumadda Kiristanka) in aad qayb ka mid ah raacdo u ah Ciise - aad culayska saartid nashaadaadyo kuwa aan ahayn Masiixa. Ka dib waxaa jira kuwa aaminsan inuu Ilaahay iyaga jecel yahay iyo inay xidhiidh la leeyihiin isaga, laakiin u arag inaan loo baahnayn inay ka qaybgalaan nolosha kiniisadda. Iyaga oo ku dhegan aragtidan, way diidayaan (laga yaabee si ula kac ah) xiriirkooda iyo xubin ahaanshaha firfircoon ee jidhka Masiixa. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo ay aaminaan hagida Ilaahay waqti ka waqti, iyagu ma doonayaan isaga inuu si buuxda ula wareego noloshooda. Waxay rabaan in Ilaahay noqdo duuliyahooda. Qaarkood waxay doorbidaan Ilaah inuu noqdo kaaliyehooda duulimaadka, kaasoo loo maleynayo inuu keeno wax la dalbado markasta iyo ka dib. Ilaah waa tijaabadeena - wuxuu ina siiyaa jihada nagu hogaamisa nolosha dhabta ah. Runtii, waa jidka, runta iyo nolosha.
Kaqeyb gal Ilaah beel ka mid ah kiniisada
Eebbe wuxuu ugu yeerayaa mu'miniinta inay u horseedaan wiilal badan iyo gabdho inay isaga la ammaano (Cibraaniyada 2,10). Wuxuu nagu martiqaadayaa inaan ka qeybgalno himiladiisa dunida oo dhan annagoo nool oo wadaagno injiilka. Waxaan tan u wada qabannaa annagoo ah xubnaha jidhka Masiixa, kaniisadda ("Adeeggu waa ciyaar kooxeed!"). Qofna ma haysto dhammaan hadiyadaha ruuxiga ah, sidaa darteed dhammaantood waa loo baahan yahay. Wadajirka kiniisadda ee aan ku wadaagno oo aan wadaagno - waan dhisnaa oo is xoojinaa. Sida qoraaga warqaddu u yahay Cibraaniyada ayaa na waaniyey, kama tagno jameecooyinkayaga (Cibraaniyada 10,25), laakiin la soo raac kuwa kale sidii aad u qaban lahayd shaqadii Ilaah noogu yeedhay annaga oo ah bulsho mu'miniin ah.
Ku raaxayso nolosha dhabta ah ee nolosha Masiixa
Ciise, oo ah Wiilka Ilaah wuxuu abuuray nin, wuxuu naftiisa u huray si aan u helno "nolosha weligeed ah oo ay kaamil tahay" (Yooxanaa 10,9: 11). Maahan nolol leh hodan la hubo ama caafimaad wanaagsan. Had iyo jeer xanuun la'aan maahan. Taa bedelkeed, waxaan ku nool nahay aqoonta ah in Eebbe ina jecel yahay, waa cafiyay oo na aqbalay sidii carruurteennii korsatay. Halkii ay ku noolaan lahayd cadaadis iyo adkayn, waxaa ka buuxa rajo, farxad iyo hubaal. Waa nolol aan hore ugu soconno oo aan ku noqonno wixii Ilaah inoo dejiyey annagoo ah Ciise Masiix kuwa raaca Ruuxa Quduuska ah. Ilaah, kii wax ku xukumay xumaanta, ayaa ku xukumay iskutallaabta Masiixa. Sidaa darteed, ma jiro mustaqbal xumaanta oo wixii la soo dhaafay waxaa lasiiyay jihayn cusub oo aan kaga qaybqaadan karno caqiidada. Ilaah uma oggolaanin inay wax dhacaan oo uusan heshiin karin. Xaqiiqdi, "jeexitaan kasta waa la tirtiray, maxaa yeelay Ilaah, Masiixa iyo Ruuxa Quduuska ah, wuxuu wax walba ka dhigaa mid cusub" (Muujintii 21,4: 5). Tani, asxaabta qaaliga ah iyo shaqaalaha, ayaa ah warka ugu wanaagsan! Waxay leedahay Ilaah ilaahay haka quusan maayo xitaa hadaad u dhiibto. Rasuul Yooxanaa wuxuu sharxayaa, "Ilaah waa jacayl" (1 Yooxanaa 4,8) - Jacaylku waa dabeecadiisa. Ilaah weligiis ma joojin jacaylkiisa maxaa yeelay haddii uu sameeyo wuxuu ka hor imaan doonaa dabeecadiisa. Sidaa daraadeed, waa inaan dhiirrigelin karnaa inaan ogaano in jacaylka Eebbe ku jiro dadka oo dhan, ha noolaadeen ama ha noolaadeen. Tani waxay sidoo kale saameyn ku leedahay Friedrich Nietzsche iyo dhammaan kuwa kale ee caabuda caleenta. Waxaan rajeyn karnaa in jacaylka Ilaah uu sidoo kale gaadhay Nietzsche, kaasoo, wax yar ka hor dhamaadka noloshiisa, uu soo maray toobad iyo rumaysad waxa Ilaah ku talo jiro inuu siiyo dadka oo dhan. Runtii, “ku alla kii magaca Rabbiga ku baryaa, waa badbaadi doonaa” (Rooma 10,13). Waa wax layaab leh in Eebbe weligiis joojin jacaylkiisa.